Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, ka dib markii uu kasoo amba-baxay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Socdaalka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ee magaalada Muqdisho ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay tan iyo markii xilka loo doortay maalintii Isniinta ahayd ee lasoo dhaafay.
Uljeedka safarka madaxweynaha Hirshabeele ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu yahay sidii uu kulan ula yeelan lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madax ka tirsan hay’addaha caalamiga oo Muqdisho ku sugan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xasuustaa inuu ka mid ahaa madaxdii sida weyn dadaalka xoogan iyo kharashaadka u gelisay sidii loo dooran lahaa Cali C/laahi Cosoble oo haatan ah madaxweynaha maamulka Hirshabeele.
Warar hoose aynu heleyno ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu usii gudbi doonno magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo uu doonayo inuu kulan kula soo yeesho Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif iyo odayaasha dhaqanka halkaasi ku sugan.
Ilaa iyo haatan lama oga inta maalin uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble sii joogi doonno magaalada Muqdisho, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa inuu ka warbixiyo uljeedka safarkiisa iyo waxyaabaha uu damacsan yahay inuu sameeyo.